अदालतबाट प्रतिकूल फैसला आयो भने जुधेर अघि बढ्छौं – Nepal Press
अदालतबाट प्रतिकूल फैसला आयो भने जुधेर अघि बढ्छौं
‘प्रतिगमन भएको छ, जनतालाई सडकमा ओराल्छौं’
२०७७ पुष ११ गते १५:५०
साबिक नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवाली पार्टी एकतापछिको अवधिमा लगभग छायाँमा परे । संसदीय राजनीतिमा जननिर्वाचित नभएपछि नेताहरु छायाँमा पर्नु स्वाभाविक हो । तत्कालीन एमालेका १६ जना पदाधिकारीमध्ये २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा चुनाव नलडेका वा टिकट नपाएका नेता ज्ञवाली मात्र थिए ।
उनी पार्टीभित्र माधव नेपाल पक्षका भएकाले केपी ओलीबाट पेलिएको गुनासो गर्दै नै आएका थिए । राष्ट्रियसभाको टिकट अपेक्षा गरेको ज्ञवालीले त्यो मात्र होइन प्रदेश कमिटी गठनमा इन्चार्जको भूमिका समेत नपाएपछि ओलीविरुद्ध खरो बोल्दै आएका थिए ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवाली अहिले प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा छन् । उनै ज्ञवालीसँग नेकपा विभाजनपछिको अवस्थाबारे गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टक ।
आरामदायी बहुमत पाएर सरकारमा पुग्दा पनि संसद विघटन गर्नुपर्ने र पार्टी फुट्ने अवस्था कसरी आयो ?
नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले जनताबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने जुन परिस्थिति आयो यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमै पनि विशिष्ट घटना थियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकार बनेको चाहिं शायद संसारमै पहिलो घटना हो ।
यस्तो अनुकूलता बीपी कोइरालालाई पनि थिएन । किनकि त्यतिबेला राजाको तरबार झुन्डिएकै थियो । तर, अहिले पार्टी भित्र र बाहिर पनि कुनै अवरोध थिएन ।
यस्तो बेलामा पनि पार्टीभित्र छलफल भयो, बहस भयो, कतिपय कुुरामा आलोचना भयो भन्ने नाउँमा मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने बहाना बनाएर संसदै विघटन गर्ने कुरा अक्षम्य र गम्भीर अपराध हो ।
विभिन्न मान्छे, पार्टी, नेताहरूलाई दोष देखाएर, कसैका कमजोरीलाई दोष देखाएर यो कुराबाट पन्छिन मिल्दैन । कमि–कमजोरी जो–कसैका पनि हुनसक्छन् तर त्यसो भयो भन्दैमा मुलुकलाई आघात पुग्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आघात पुग्ने काम गर्न मिल्दै मिल्दैन । यो चाहिं कुनै न कुनै ढंगले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने ‘डिजाइन’ मा केपी ओली लाग्नुभयो ।
उहाँ नै कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउनलाई आफैं लाग्नुभयो ?
हो, उहाँ आफैं लाग्नुभयो । उहाँलाई भलिभाँती थाहा छ कि यो पार्टी विभाजित हुँदा, संसद विघटन गरेर चुनावमा जाँदा कम्युनिष्टहरूले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यो किन गर्नुभएको होला त ? कम्युनिष्टहरूको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेको छ र कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव जुन छ, त्यसलाई चकनाचुर पार्ने, ‘ग्य्राण्ड डिजाइन’ अन्तर्गत नै यो गर्नुभएको छ । उहाँले यो जानी–जानी गर्नुभएको छ ।
जतिसुकै राष्ट्रवाद, क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि केपी ओली कम्युनिष्ट हुँदै होइन । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने योजना अन्तर्गत उहाँले काम गर्नुभएको हो । यस हिसाबले केपी ओलीलाई नेपालको ‘यल्तसिन’ भन्न मिल्छ । उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि क्षत–विक्षत पार्नुभएको छ ।
बाहिर उहाँले जतिसुकै राष्ट्रवाद, क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि उहाँ कम्युनिष्ट हुँदै होइन । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने योजना अन्तर्गत उहाँले काम गर्नुभएको हो । यस हिसाबले केपी ओलीलाई नेपालको ‘यल्तसिन’ भन्न मिल्छ । उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि क्षत–विक्षत पार्नुभएको छ ।
हाम्रो अत्यधिक बहुमतको सरकार थियो । यसले अझै दुई वर्ष काम गर्न बाँकी थियो । दुई वर्ष राम्रोसँग काम गरेको भए फेरि पनि बहुमत आउने सम्भावना छँदै थियो । तर, उहाँले आउँदो चुनावमा कसैको पनि बहुमत नहुने, सकभर चुनाव नै नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो । अहिले उहाँले चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो पनि कोभिड–१९ को महामारी भएका बेला । यो चुनाव पनि नगर्ने, देखावटी मात्रै हो । यो चुनाव नगराएर लोकतन्त्र मास्ने कोशिश हो ।
उहाँ चुनाव विनै अनन्तकालसम्म शासन गर्न चाहनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । चुनाव नगराउने, आफ्नो आयु लम्ब्याउँदै जाने उहाँले सोच्नुभएको होला । तर, त्यस्तो स्थिति नभएर नेपालमा अरू नै कुनै घटना घट्न पनि सक्छ ।
अरू के–के हुन सक्छ ?
हामीले नसोचेको लोकतन्त्रविरोधी घटना घट्न सक्छ । जुन डिजाइनबाट संसद विघटन भएको छ, यो त्यसको पहिलो चरण हो । संसद विघटन हुनु त पहिलो घटना हो । त्यो डिजाइनअन्तर्गत नेपाललाई के–के गर्नुपर्नेछ, त्यसका दीर्घकालीन योजना चाहिं निरन्तर जारी छन् ।
नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, नेपालको अस्थिरताबाट फाइदा लिने विदेशी शक्तिहरूले खेलिरहेका छन् र खेलिरहने छन् । यो घटनाले विदेशी शक्तिलाई खेल्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यो केपी ओलीको माध्यमबाट भएको छ ।
नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, नेपालको अस्थिरताबाट फाइदा लिने विदेशी शक्तिहरूले खेलिरहेका छन् र खेलिरहने छन् । अहिलेको घटनाले विदेशी शक्तिलाई खेल्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यो केपी ओलीको माध्यमबाट भएको छ ।
तपाईंले भनेको त्यो योजनाअन्तर्गत राजतन्त्र फर्काउने पनि हुनसक्छ ? पृष्ठभूमिमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन भइरहेको पनि देखिरहनुभएको होला ?
अत्यधिक ठूलो बहुमत यो घटनाको विरुद्धमा छ । त्यसले अहिले एउटा शुभ संकेत दिएको छ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट जोगाउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समाप्त पार्ने जुन डिजाइन छ, त्यसबाट यसले मुलुकलाई जोगाउने छ ।
मुलुकको राष्ट्रियतालाई पनि कमजोर बनाउने जुन प्रयास छ, त्यसलाई जोगाउने छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने जुन योजना छ, त्यसलाई पनि यसले रोक्ने छ । त्यो तागत, नेतृत्व अहिले हामीसँग छ । अहिले हामीसँग हजारौं हजार नेता/कार्यकर्ता छन् । हामीसँग देशव्यापी रूपमा संगठनको सञ्जाल छ । त्यसलाई हामी संगठित र व्यवस्थित गर्छौं । हामीले देशका विभिन्न लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । वार्ता पनि गरिरहेका छौं ।
हामी लोकतन्त्र जोगाउनका लागि हामी सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग आवद्ध हुन्छौं । अर्कोतिर हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित र नयाँ क्रियाशीलता, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाउने काम हामी गर्छौं ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा ३० महिनाअघि दुइटा पार्टी मिलेर नेकपा बन्दा जुन उत्साह थियो, एकता प्रक्रिया नटुङ्गिदै विघटनतिर गएपछि अहिले त चरम निराशा छ ! यस्तो चरम निराशाबीच तपाईंहरू फेरि कसरी उठ्नुहोला ?
विगतमा धेरै ठूलो निराशा, धेरै ठूलो दमन, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट अगाडि बढेर हामी यहाँसम्म आएका हौं । अहिले एउटा धक्का हामीलाई लागेको अवश्य हो । एउटा ठूलो चुनौती आएको यथार्थता हो । सजिलो छैन, यो पनि यथार्थ हो । तर, अर्को कुरा जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि सामना गर्ने त्यो हिम्मत, साहस हामीसँग छ ।
अहिले पार्टी कमिटीमा एउटा खालको निराशा छ । तर, पनि पार्टीभित्रको एउटा सचेत पंक्ति अझ त्यसप्रति क्रियाशील भएर लागेको छ । हिजो सुतेका मान्छेहरू, निष्क्रिय भएका यो देश जोगाउन, पार्टी जोगाउन फेरि एकपटक उठ्नुपर्ने अवस्था छ । देश जोगाउन उनीहरू उठ्छन् । एक छिनको निराशा हो । त्यो सधैंभरि रहन्न । यसलाई हामी हटाउँछौं । फेरि, उत्साहका साथ मुलुकका लागि जुन जिम्मेवारी बोध छ, त्यो अनुसार अब फेरि उठाउन सक्छौं ।
सग्लो नेकपामा कहीं न कहीं नेतृत्वको महत्वाकांक्षा र व्यवस्थापनमा पनि एउटा समस्या थियो । अहिले तपाईंहरूको पक्षमा पनि दुइटा अध्यक्ष बन्नुभएको छ । यहाँ त्यो समस्या आउँदैन भन्ने आधार चाहिं के ?
हामी समस्या व्यवस्थापन गर्छौं । सर्वसम्मतिले हामीले अर्को अध्यक्ष चयन गरेका छौं । हामीले एक नम्बर/दुई नम्बर नभनेर बराबरी अध्यक्ष बनाएका छौं । आलोपालो अध्यक्षता गर्ने भनेका छौं । हामी दुई जनाले निरन्तर रूपमा आपसमा समन्वय, सहकार्य गरेर मिलेर जाने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौं । त्यो सम्भावना पर्याप्त छ ।
हिजो फरक पार्टीमा भए पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड भनेको पञ्चायतकालदेखि नै संयुक्त जनआन्दोलनदेखि संयुक्त काममा उहाँहरूले सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ । शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि माधव नेपाल र प्रचण्डका बीचमा सबभन्दा बढी घनिष्ठता र सबैभन्दा बढी सहकार्य भएर त्यो टुङ्गिएको धेरै घटनाक्रम छन् ।
धेरैले उहाँहरूबीच कार्यशैली नै मिल्दैन भन्छन् नि ?
कुनै पनि मान्छेको सबै कुरा मिल्दैन । हरेक फरक मान्छेमा फरक विशेषता हुन्छ । तर, मिलाएर जान सक्छौं । उहाँहरू आपसमा मिलेर जान सक्नुहुन्छ ।
दुई अध्यक्ष रहने त संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । पछि पनि को अध्यक्ष हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा होला नि ?
महाधिवेशनपछि दुइटा अध्यक्ष रहन्न । त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौं । त्यसमा प्रष्ट छौं । महाधिवेशनपछि पनि को अध्यक्ष हुने भन्ने कुरा हामी सल्लाहले गर्छौं ।
त्यो सल्लाह त तपाईंहरूले ओलीसँग पनि त गर्ने भन्नुभएको थियो नि ?
सकिएन उहाँसँग । किनकि उहाँको नियत नै खराब थियो– आफैं प्रधानमन्त्री भएको संसद जबर्जस्ती संविधानलाई नै मिचेर विघटन गर्नुभयो । दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुभयो । अरू–अरू पनि उहाँले यस्ता थुप्रै गलत काम गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । यसले के देखाउँछ भने उहाँ लोकतन्त्रको पक्षमा होइन, त्यसलाई सिध्याउन लागि नै पर्नुभएको थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई असफल पार्न लागिरहनुभएको थियो । त्यस कारणले गर्दा उहाँसँग हाम्रो अन्तरविरोध हो ।
उहाँमा देखा परेको घनघोर दक्षिणपन्थी, संघीयता विरोधी, कम्युनिष्ट विरोधी, आत्मकेन्द्रित, व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी र निरंकुश चिन्तनका विरुद्ध हामी भित्र लडिरहेका थियौं । हामी पूर्व एमालेहरू त तीसौं वर्षदेखि उहाँसँग लड्दै आएका छौं ।
अहिले ओलीलाई तपाइँहरू जुन आरोप लगाइरहनुभा’छ तर, यत्रो समय उहाँसँगै कसरी सहकार्य गर्नुभयो त ?
उहाँ जस्तोसँग पनि सहकार्य गरेर त यहाँसम्म आउन सकिंदोरहेछ भने उहाँभन्दा इमानदार मान्छेसँग त जति कमजोरी भए पनि सहकार्य गरेरै हामी धेरै लामो समय जान सक्छौं । सबै कुरा सबैसँग नमिल्न सक्छ, तर मिलाएर जान सक्छौं । लक्ष्य, उद्देश्य र सिद्धान्त एउटै भएपछि हामी मिलेर जान्छौं, जान सक्छौं ।
अहिले को वैधानिक भन्ने दाबी, प्रतिदाबी भइरहेको छ । खास वैधानिक चाहिं को हो ?
वैधानिक हामी नै हो । हामीसँग बकाइदा बहुमत छ । त्यो हामीले निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर गरेर पठाएका छौं । विगतमा निर्वाचन आयोगमा हाम्रो नाम दर्ता भएको छ । हाम्रा सबैका हस्ताक्षर सुरक्षित छन् । अहिले केपी ओलीको तर्फबाट बुझाएका नाम र हामीले बुझाएको नामहरूको प्रमाणीकरण हुन्छ । उतातिर प्रष्ट रूपमा अल्पमत छ ।
११०० जनाको बनाए पनि ११ हजारको केन्द्रीय कमिटी बनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यो नौटंकी हो । त्यो धेरै दिन टिक्दैन । अत्यधिक बहुमत हाम्रो पक्षमा भएको हुनाले त्यो आधिकारिकता हामीलाई नै प्राप्त हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अहिले अदालतमा पुगेको छ । त्यहाँबाट संसद पुनस्र्थापित होला त ?
अदालतले संविधानबमोजिम गर्नुपर्छ । संविधान भन्दा बाहिर अदालत जान पाउँदैन । अदालतले संविधान बमोजिम नै गर्छ, गर्नुपर्छ । हामीले सोचे भन्दा प्रतिकूल भयो भने पनि हामी लडेर, जुधेर अगाडि बढ्छौं ।
संविधान भन्दा बाहिर अदालत जान पाउँदैन । अदालतले संविधान बमोजिम नै गर्छ, गर्नुपर्छ । हामीले सोचेभन्दा प्रतिकूल भयो भने पनि हामी लडेर, जुधेर अगाडि बढ्छौं ।
तपाईंहरूले भने अनुसार प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापन भएन भने चुनावमा जानुहुन्छ ?
त्यसबारे हामी पछि निर्णय गर्छौं । अहिले नै हामी जाँदैनौं, जान्छौं भनेर भन्दैनौं । अदालतको निर्णयपछि के गर्ने भनेर हामी विश्लेषण गर्छौं । कस्तो परिस्थिति तयार हुन्छ त्यो हेरेर हामी निर्णय गर्छौं । हामी अहिले चुनावमा भाग लिन्छौं, लिंदैनौं भनेर भन्दैनौं ।
आन्दोलन चाहिं कस्तो खालको गर्नुहुन्छ ?
हामी आन्दोलन पनि गर्छौं । जुन प्रतिगमन भएको छ त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्छौं । त्यसविरुद्ध जनतालाई सडकमा उठाउँछौं । पार्टीलाई परिचालन गर्छौं ।
तपाईंहरूले मिलेर संघर्ष गर्ने भनेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक गर्नुभएको थियो । तर, त्यसले त मूर्तरुप लिएन नि ?
हरेक पार्टीका आआफ्ना नीति हुन्छन् । हामीले जे नीति लिन्छौं, कांग्रेस र अरू दलले पनि त्यही लिन्छन् भन्ने छैन । नेपाल मजदूर किसान पार्टी बाहेक हरेक पार्टीले त्यसको विरोध गरेका छन् । सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, वामपन्थी पार्टीहरूले यो घटनाको तीव्र विरोध गरेका छन् । आलोचना गरेका छन् । भ्रत्र्सना गरेका छन् ।
प्रकाशित: २०७७ पुष ११ गते १५:५०